Warar Goos goos ah. Ruunkinet 02/11/2009
Qarax sababay dhimasho oo xalay ka dhacay baladweyne
Isniin, November 02, 2009 Waxaa saqdii dhaxe ee xalay si weyn looga wada maqlay dhammaan Xaafadaha Magaalada Beledweyne Qarax aad u cuslaa oo dadku intiisa badan hurdada ka toosiyay kaasoo ka dhacay iridka hore ee Xarunta Maamulka Goballka Hiiraan.
Qarax oo ahaa mid ka dhashay Miino sida ay saxafada u sheegeen Saraakiisha aqoonta u leh wax yaabaha qarxa, ayaa inta la og-yahay waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 6 Ruux oo dhamaantood ahaa kuwii ku howlanaa aasida Miinada oo saakay waabarigaa hore hilbahooda lagu arkayay dusha sare ee gaadaha iyo goobaha ganacsiga ee ku dhaw halka qaraxu ka dhacay.
Dadweyne isugu soo baxay goobta qaraxu ka dhacay xalay ayaa siweyn uga naxay markii ay arkeen muuqaalka hilbo googo'ay iyo dareeskii ay wateen dadkii qaraxa ku dhintay oo goobta daadsanaa, waxeyna dadku bilaabeen markiiba in ay ururiyaan hilbaha si markaa loo aaso.
Qaraxan ayaa noqonaya kii labaad oo ay ku dhintaan dad aasayay waxaana xusid mudan in dhowr bilood ka hor qarax kan la mid ah oo ka dhacay Xaafadda Howl-wadaag ee Magaalada Beledweyne ay ku dhintaan labo ruux oo xiligaa dhulka ku aasayay, waxaana Saraakiil ay la hadlayay saxafada ay sheegeen in arrintaasi tahay mid ka dhalatay farsamo xumo ka timaada aqoon darrada kuwa isku daya in ay farsameeyaan wax yaabaha qaraxa ama dhulka ku aasa.
Dhinaca kale Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee maalintii shalay la wareegay gacan ku heynta Is-goyska istaraatijiga ah ee Jante-kuundihso ayaa wali halkoodii ku sugan, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in Ciidamada Xisbul Islaam ee lagaga adkaaday dagaalladii dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay dib isu soo abaabulayaan si ay weeerar ugu soo qaadaan Ciidamada fadhigoodu yahay deegaanka Jante-kuundisho.
Dowladda Jibouti oo cadeesay in somalia ay ciidamo u soo dirayso
Dowladda Jibouti ayaa ku adkeysaneysa in ay Ciidamo u soo dirto Soomaaliya, kuwaasi oo ka mid noqon doona ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jibouti Yaasiin Cilmi Buux ayaa sheegay in Ciidamadii ay Dowladda Jibouti ku caawineysay Dowladda Soomaaliya ay tegi doonaan Magaalada Muqdisho, isla markaana ay ka qeybqaadan doonaan soo celinta nabaddii Soomaaliya.
"Ciidamadan aan ku caawineyno Dowladda Soomaaliya waxay tegi doonaan Magaalada Muqdisho kaddib marka uu u dhamaado diyaargarow ay ku jiraan, wuxuuna caddeeyay in aysan Dowladdiisa ka laaban doonin ballanqaadkeedii ahaa in ay Ciidamo u dirto Soomaaliya.
Mar Wasiirka wax laga weydiiyay sida ay dowladdiisa u arkeyso hanjabaad uga timid dhinaca xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ahayd in ay qabsan doonto Jibouti ayaa wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay ilowsan tahay in dadka iyo dalka ay u hanjabeyso ay dad walaal ah yihiin.
"Waxay ilowsan yihiin in dadka ay u hanjabayaan ay yihiin dad Soomaali ah oo walaalahood ah oo aysan ahayn dad ajnabi ah"ayuu yiri wasiirka Arrimaha Dibadda Jibouti oo sheegay in Jibouti ay ka feejignaan doonto hanjabaadda uga timid Al-Shabaab.
Wasiirka oo lahadalayay saxafada ayaa wuxuu dhanka kale soo dhaweeyay in Dowladda Jibouti ay Safaaraddeedii ka furato Soomaaliya, wuxuuna carrabka ku dhuftay in ay ahayd in ay mar hore ka furtaan oo ay Safaaradaha Caalamka ka soo horreeyaan balse ay haatan qorneyd in ay ka furtaan Soomaaliya.
Hadalka uu bixiyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Jibouti Yaasiin Cilmi Buux ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo shalay uu madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed uu warqadaha Aqoonsiga Danjirenimo ka guddoomay Safiir ay Dowladda Jibouti u soo magacawday Dalka Soomaaliya, kaasi oo lagu magacaabo Dayib Dubad Rooble.
Dowladda Jibouti ayaa dhawaan waxay tababar u soo gebagebeysay ciidamo Soomaali ah oo gaaraaya 613 askari, kuwaasi oo dib ugu noqday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ballanqaaday in ay tababarro kale siin doonto Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Dowlada somaliya oo markale sheegtay in ay wada hadalo la galayso mucaaradka
Raiisal wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid CaLi Sharmaarke ayaa ka dhawaajiyay inuu xukuumadiisu ay wadahadal la gali doonto kooxaha islaamiyiinta mayalka adag ee dagaalka kala soo horjeeda Dowlada iyadoo Raiisal wasaaruhu uu sheegay in tani ay tahay mida kaliya ee laga filan karo soo afjarida colaada mudada 20-ka sano ku dhow ka holcaysa Soomaaliya.
Cumar C/rashiid ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyay wargayska Financial times intii uu booqashada ku joogay magaalada London maalmo ka hor, waxaana uu raiisal wasaaraha Soomaaliya uu carabka ku dhuftay in tiro dagaal yahaniin ah ay booska usoo faaruqinayaan mid kamida labada kooxood ee ugu wayn ee mucaaradsan dowlada.
Mr Sharmarke ayaa intii uu booqashada ku joogay magaalada London maalmo ka hor waxaa uu halkaasi kula kulmay saraakiisha dowlada Braitian, isagoo sidoo kale hadal uu ka jeediyay Chatham House-ka uu ka digay in hadii aysan beesha caalamku taageero u fidin Somalia ay khatar ugu jirto inay noqoto hoy ay ka taliyaan kooxda mayalka adag ee Al Qaacida, sida dalka Afghanistan uu ahaan jirtay sagaashamaadkii oo kale.
"Qori caaradii xal uma aha colaadan ayuu yiri Mr Shar ma arke, oo intaasi ku daray waxaan u malaynayaa in arintan lagu xalin karo iyadoo loo maro wadaxaajoodyo siyaasadeed" ayuu yiri Raisalwasaaruhu.
Labada kooxood ee Al Shabaab iyo xisbul Islaam ayaa ah labada kooxood ee islaamiyiinta ugu wayn ee qaadacsan hanaanka maamul dowladeed ee wadanka Soomaaliya, iyadoo labadan kooxood ay kusii dhex jiraan kooxo si aada usii mayal adag, balse si kastaba ha ahaatee labada kooxood ayaa waxaa ku jira shaqsiyaad baadi goob ugu jira fursado siyaasadeed iyo kuwa kasoo jeeda dad sabool ah oo baadi goob ugu jira inay lacago kasbadaan ayuu yiri Raiisal wasaaruhu.
Waxaan hubaa in kuwa kooxahan ugu biiray fursadaha siyaasadeed iyo dhaqaale wadaxaajood lala gali karo, balse kuwa mayalka adag ee doonaya xasilooni darida inay ka abuuraan Soomaaliya oo kaliya maahee gobolkoo dhan iyo dunida, umalayn maayo in ragaasi ay waxdan ahi aysan ku jirin lahadalkooda ama ka odayaynta la heshiintooda.
Dowladu waxaa ay had iyo jeer albaabka laga soo galo geedka wadaxaajoodka nabada ay furtaa qaar kamida kooxaha dareen diidsan iyada,xitaa marka rabshaduhu ay halka ugu sareeysa marayaan ayuu yiri Mr Sharmaarke.
Raiisal wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa sheegay inay dowladiisa ku guulaysatay inay qaarkamida hogaamiyeyaasha Xisbul Islaam soo xero galiso waxaan uu sheegay inay sii wadi doonaan arintaasi.
Ruunkinet, Abdirashid, Rashka